Ciyaaraha – Page 20 – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Diego Costa oo Macalin Mou kula midoobi doona gagida Old Trafford
March 20, 2016	Leave a comment 38 Views
Jose Mourinho ayaa doonaya weeraryahanka Kooxda Chelsea Diego Costa si uu u qayb ugu noqdo Kooxda Manchester United bilowga xagaaga danbe, sida ay sheegayaan wararka. Tababaraha reer Portugal ee Mou ayaa hishiis la gaaray Kooxda United, xilli lagu bedeli doono Louis van Gaal dhamaadka xilli ciyaareedkan, hase ahaatee hore u sii carbuuntay Weeriryahanka carada badan ee Kooxda Blues Costa. Shabakada ...
Cayaariyahan Felipe Anderson oo mar kale ku digtay Kooxda United
March 20, 2016	Leave a comment 45 Views
Weeriryahanka Kooxda Lazio Felipe Anderson ayaa mar kale u dayriyay Kooxda ugu guulaha badan England ee Manchester United, sida lagu daabacay qaar ka mid ah Joornaalada kasoo baxa caasimada dalka Talyaaniga ee Roma. Naadiga United ayaa diyaar u ah inay ku baayacdo Ciyaaryahanka reer Brazil ee Anderson qiimo lacageed gaaraya € 50-million oo ginni si uu qayb ugu noqdo xilli ...
Isku aadka wareega 8-da ee Champions League oo la sameeyay
March 19, 2016	Leave a comment 55 Views
Isku aadka wareega 8-da ee Quarter Final Koobka Horyaalada Qaaradda Yurub ee Champions League ayaa la sameeyay goor dhoweyd, iyadoo kooxda heysata Koobkan ee Barcelona ay ku aaday kooxda kale ee ay isku wadanka yihiin Atletico Madrid. Sida ka muuqatay shaxda Isku aadka waxaa aad loo saadaalinayay in labo koox oo isku wadan ah inay isku aadi doonaan wareega 8-da, ...
Barcelona iyo Bayern Munich oo u soo baxay wareega 8-da ee Champions League
March 17, 2016	Leave a comment 33 Views
Kooxaha Barcelona iyo Bayern Munich ayaa iska xaadiriyay wareega 8-da ee Champions League, kadib markii ay xalay guulo gaareen lugtii labaad ee wareega 16-ka. Barcelona oo lugtii hore Arsenal kaga soo adkaatay gurigeeda ayaa xalay ku soo dhoweysay garoonkeeda Camp Nou, waxaana ay maanka ku heysay in aanay si sahal ah Arsenal guul ugala hoyan karin garoonkeeda. Daqiiqadoo 18aad ee ...
Manchester City oo quarter-final ka u gudubtay
March 16, 2016	Leave a comment 35 Views
Manchester City ayaa markii ugu horeysay taariikhda u gudubtay wareegga quarter-finalka ee horyaalka kooxaha Yurub, Champions League. Laakiin tabar la’aan waxba maysan dhalin gool, 0-0 ayeyna la galeen kooxdii ay la ciyaarayeen ee Dynamo Kiev. Lugtii koobaad ee ciyaarta kooxda City waxay ku adkaatay, 3-1, inkastoo koox adag ay haysteen, hadana waxaa dhaawac ka ah difaaca dhexe ee Vincent Kompany ...
Daniel Sturridge oo loga gacan haatinaayo Italian Serie A
March 15, 2016	Leave a comment 37 Views
Weeraryahanka Kooxda Liverpool Daniel Sturridge ayaa u muuqda mid sii dhamaanaya mustaqbalkiisa garoonka Anfield, ka dib markii ay soo bexeen qaar ka mid ah Kooxaha dalka Talyaaniga oo dalab ka gudbiyay saxiixiisa. Sturridge ayaanan si wanaagsan kaga soo kabsan dhaawacyadii soo gaaray tan iyo sanadii 2013-kii, hase ahaatee Kooxda ka dhisan gobolka Merseyside u dhaliyay 46-gool 79-kulan. Kooxda Napoli ayaa ...
Real oo ku dagaalamaysa saxiixa Eden Hazard
Kooxda Real Madrid ayaa mar kale u jeesan doonta saxiixa kubad qaabeeyaha Kooxda Chelsea Eden Hazard, kaasi oo doonaya inuu isaga tago London. Xidiga heerka Caalami ee Wadanka Belgium Hazard ayaa ku guuldaraystay tan iyo bilowgii xagaagan inuu saamayn ku yeesho Kooxda Blues, taasi oo keentay inuu lumo qaab Ciyaareedkiisii fiicnaa ee Kooxda Chelsea. Tababaraha Kooxda Los Blancos Zinedine Zidane ...
isku aadka SEMI-FINAL FA cup-ka
March 15, 2016	Leave a comment 42 Views
Everton oo 2-0 kusoo reebtay kooxda Chelsea ayaa Semi-finalka FA Cup waxay ku aadeysaa oo ay la dheeli doontaa midii soo badisa Manchester United ama West Ham. Sidoo kale kulanka kale ee Semi-finalka ee isna lagu dheeli doono garoonka weeyn Wembley, waxaa isku beegmay kooxaha Crystal Palace iyo kooxda kale Premier League ee Watford. Romelu Lukaku ayaa ahaa geesigii kooxda ...
Real madrid oo so bandhigtay in James Rodriguez lagu badasho Eden Hazard
March 15, 2016	Leave a comment 83 Views
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa iney dooneyso in Chelsea ka dhaadhiciso in James Rodriguez ay kaga bedeshaan ciyaaaryahan Eden Hazard. Wararka la helayey dhowaan ayaa qeexayey in labada ciyaaryahan ay jahawareer ka qaadeen nolosha labada magaalo ee ay iminka ka kala ciyaaraan. Madrid ayaa mudo kuraad joogtey wiilkan reer Belgium ee Hazard kaasi oo gacanta Chelsea ka bixi doona ...
Banaadir iyo Saxafi oo galabta ku ballansan garoonka Koonis
March 14, 2016	Leave a comment 50 Views
Kooxaha Saxafi iyo Banaadir ayaa galabta ku ballansan garoonka Koonis ciyaar ka tirsan horyaalka heerka koowaad ee Soomaaliya. Kullankan ayaa ah mid adag waxaana BSC ay dooneysaa in ay sii dheereysato hoggaanka halka Saxafi iyana dhankeeda guul ay u baaahan tahay. Banaadir ayaa ku jirta kaalinta 1’aad iyadoo horyaalka ku hoggaamineyso shan dhibcood , waxaana min 19 dhibcood wada leh ...